Wararka Maanta: Khamiis, July 12, 2018-Waare oo daah furay Kalfadhiggii Afaraad ee Baarlamaanka dowlad gobolleedka Hirshabeelle
Waare oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay xildhibaannada baarlamaanka Hirshabelle.
Arrimaha uu ka hadlay Madaxweyne Waare ayaa waxaa ka mid ahaa kuwa taabanaya dhinacyada Amniga, Dib u dhiska, Siyaasada iyo arrimo kale oo faro badan.
Isagoo ka hadlayay arrimaha dib u dhiska ayaa waxa u sheegay Madaxweyne Waare in dhowaan laga hirgelin doono caasimada Hirshabelle xarun ay leeyihiin Golaha Shacabka iyo xarumo kale oo ay wasaaradaha ku shaqeyn doonaan.
Dhanka siyaasada ayuu sheegay Madaxweyne Waare in ay jiraan dad doonaya in aysan horumar gaarin Hirshabelle oo wax walba oo la xirxiro dib u furfuraya balse ma cadeyn cidda ay yihiin kuwaas.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle inay dardar geliyaan howlaha horyaala oo ay ugu horeeyaan sidii loo anisixin lahaa hindise sharciyeedyada horyaala.